STOP HEP-C IN MYANMAR - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဤပရဟိတ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူ
Hsu Khaing Phyoe
Phyu Thi Htun
Panda LA PYae OO
Myat Lay Nge
Chit Hnin Cho
Ye Yint Tun Oo
Joe Z Hnin
Mickel Oo Thar
Naw Htoo War
Nyo Thet Khaing
C Thu Phyoe
Kaung Ywet Seinn
Khin Mar Kyi
Hsu Myint Myat Kyaw
Robert Linn Htet
Hpuk Shik Ahgyung
Thae Su Khaing
Thin Thin Hmwe
Daw Shwe Sin
Soe Yamone Phoo
Ngu Wah Lwin
Sayama Gyee Yadana
Htet Hsu Han
51. Nelly Snow Lay
52. Ann Mary
53. May Po Chit
54. Snow Angel
55. Thar Nge
56. Khin Nilar Zaw
57. Myo Hla Kyi
58. Khinyadanar Aung
59. Patricia May
60. Terry Viettie Tun
61. Ko Te Za Oo
62. Nay Min Aung
63. Seint Seint
64. Aye Aye Than
65. Snow Queen
66. Lilly Bice
67. Su Hlaing Oo
68. Wai Yan Tun
69. Yin Yin Htwe
70. Nan Mhuehnin May
71. Gumjala Nhkum
72. Oo Oo Phyo Lay
73. Aye Zarli Pyone
74. Myat Theingi Zaw
75. Htet Oo Lin
76. May Kyi Nyein
77. Hnin Waimdy
78. Ko Htun
79. Aung Moe Win
80. Kyu kyu Hmwe
81. May Thet Naing
82. Thi Dar Tun
83. Khin Mg Soe
84. Nwe Pin
85. Manweni Nweni
86. Su Mon Win
87. Mi The Lay
88. Than Phyo Aung
89. NayNay Lay
90. Nay Htet
91. ရတနာ သူ
92. Prince’s Casper
93. Shwe Yee Win MohtMoht
94. Hein MyatHtoo
95. Mg Chit Thu
96. Sai Pyae
97. Ei Phyu Soe
98. Sein Lae Phyu
99. Target Flow
100. Nge Wine
မေးခွန်း – ကျွန်ုပ်၏ FB အကောင့်အားစာရင်းတွင်တွေ ့၍မည်ကဲ့သို ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း?
အဖြေ – ၄င်းသည်ဆုရရှိကြောင်းစီစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ကျွနု်ပ်တို ့၏ Facebook Admin မှဆုရရှိသူ များကို နာမည်အပြည့်အစုံ၊ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ Facebook မက်ဆေ့စ်ထဲမှတဆင့်မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီအခမဲ့ဆေးစစ်မှုအတွက်ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူရန်ဆုရရှိသူများဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအသည်းရောင်အသားဝါ-စီအခမဲ့ဆေးစစ်မှုခံယူရန် သတ်မှတ်ထားသောကာလမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂ – ၁၅ အတွင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Samtivej သို ့တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ မရပါက Facebook မက်ဆေ့စ်မှတဆင့်မိမိသည်ဆုရရှိသူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို ့သေ်အဆင်မပြေမှုအားနားလည် လက်ခံပေးပါရန်ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
မေးခွန်း – အသည်းရောဂါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပရိုဂရမ်အား ၅၀% နှုန်း လျော့စျေးဖြင့် မိမိ၏Facebookသူငယ်ချင်းများအားပေးလို ့ရပါသည်ဟုကြားပါသည်။မည်ကဲ့သို ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?
အဖြေ -Samitivej ဆေးခန်းတွင်သင်ဆေးစစ်သည့်နေ ့၌ Selfie ရိုက်၍ သင့်၏ Facebook ၌သူငယ်ချင်းများအား (အရည်အတွက်ကန် ့သတ်ထားခြင်းမရှိ) Tag ပါက ပုံမှန်စျေးအရထိုင်းဘတ်ငွေ ရ,၂၃၉ ကို (၅၀% လျော့ထားသောနှုန်းထားဖြင့်)အသည်းရောဂါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပရိုဂရမ်အားသင့် Tagထားသောသူငယ်ချင်းများက ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း- Tag ထားသောမိမိ သူငယ်ချင်းများအားသည် ၄င်းတို ့Liver Check Up Program အတွက် 50% Discount ရရှိထားကြောင့်ဆေးခန်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ?
အဖြေ – Liver checkup Program 50% discount ကိုအသုံးပြုလိုကြောင်းဆေးခန်းရှိ ဝန်ထမ်းများကိုအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးခန်းသို ့ရောက်သောအခါတွင် ပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရရှိသူမှ၄င်း၏Postတွင် မိမိကိုTag ထားကြောင်း ဆေးခန်းရှိဝန်ထမ်းများကို ပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း – ကျွနု်ပ် Selfie ကို တင်ထားသော်လည်း ကျွနု်ပ်နာမည်ကိုဆုရရှိသူစာရင်းထဲတွင်မတွေ ့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?
အဖြေ – အကယ်၍ဆုရရှိသူအယောက်(၁၀၀)မပြည့်သေးပါက၊ သင့်၌အခွင့်အရေးရှိပါသေးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါသရုပ်ဖော်ပုံမှသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များအဆင့်ဆင့်ကိုလုပ်ဆောာင်ပြီးမရှင်း လင်းမှုများရှိပါက Facebook Admin ထံသို ့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါကကျေးဇူးပြုပြီး Facebook Admin ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။